Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Matte Black Bamka Qolka Musqusha 4 Xarumood Inch
qiimeeyay 4.93 out of 5 ku salaysan 28 ratings macaamiisha
(28 dib u eegista macaamiisha)
wowowfaucet waxaa ka go'an inay bixiso badeecado tayo sare leh oo wax ku ool ah. Qubeyska musqusha ee casriga ah waxaa la socda tilmaamo ku saabsan qalabka rakibida. Rakibaadda waa mid fudud oo sahlan in la rakibo.
2321200B tilmaamaha rakibaadda
SKU: 2321200B Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: 2 Qabashada, Xararka 3, Black
Waan jeclahay qasabadahaan! Way ka raqiisanaayeen Lowe iyo Home Depot waxayna u muuqdaan kuwo aad u fiican. Cadaadiska biyuhu runtii wuu fiican yahay sidoo kale.
qasabado adag oo aad u fiican. Waxaan haysanay mid ilaa sanad ah. Hadda waxaan dhiseynaa oo waxaan ku iibsannay laba kale gurigeenna.
Weli si weyn ayuu u shaqeynayaa sanad kadib rakibiddiisa. Isticmaal maalinle ah, oo aan lahayn astaamo daadanaya.
Run ahaantii shay tayo fiican leh. EIt waxay umuuqataa mid kufiican qolka suulkeyga ee dukaamada lacag badan ayaan markale ku iibsan lahaa gurigeyga kale waxay la timid wax walbo oo riix badhanka si biyaha looga joojiyo saxanka jirku lahaa
asy si loo rakibo.
Jacaylka qasabaddan iyo qaybta ugu fiican waa qulqulka pop up-ka, aad ayeyna ugu fududahay in la galo Qasabadani waxay u muuqataa mid ku fiican suuligayga waxayna si fiican u shaqaysaa. Rakib oo kaliya muuqaal qabow.
Wax tayo wanaagsan leh iyo qiimaha macquulka ah, waxaan kugula talin doonaa badeecadan sheybaakada musqusha
Ma qumman yahay. Qiimo weyn, looma baahna in lacag waali ah lagu bixiyo Bakhaarka Guriga. Tani waa mid aad u qurux badan, casri ah oo si fudud loo isticmaali karo. Waan jeclahay, wuxuu musqusha ka dhigaa mid qurxan.
Waxaan jeclahay intee in le'eg iyo bartamaha saxanka ay ku fadhido Dhamaadka / midabku waa fiican yahay. Fududeynta adeegsiga gacmaha ayaa fiican oo fudud sidoo kale. Mid kale ayaan u iibsanayaa musqusha kale.
Aad ayaan ugu qanacsanahay sheygan. Way fududahay in la rakibo, waxay leedahay muuqaal casri ah oo aad u fiican oo si fiican ugu shaqeysa ugu yaraan hadda. Badeecad aad u fiican qiimahaan.
Si farxad leh ayaa loola yaabay tayada qasabadda iyo sahlanaanta rakibidda. Wax walba waxay ku habboon yihiin si loo beddelo kii hore, gaar ahaan markii tuubbooyinku aysan ahayn shaqadeena aan jecel nahay. Caadi ahaan waxaan u baahanahay inaan sameyno safar dheeri ah si aan qayb uga helno. Tani waxay u dhacday si habsami leh.
Ilaa hadda mid ka mid ah qasabadaha ugu wanaagsan ee lacagtu iibsan karto. Tan waxaan ku helay nus ka mid ah waxa dukaanka waaxdu rabto oo ay dareentay oo u muuqatay mid ka wanaagsan tooda. Xaqiiqdii mar labaad iibso
Badeecad aad u wanaagsan oo adag. Furka waa weyn yahay wuxuuna daboolayaa godka godka oo dhan (kuma sii socdo gudaha godka bullaacadaha).
Waxaan runtii jecel nahay sida ay u muuqato ka dib markii la rakibo tan. Shayga waa tayo fiican oo si fiican loo soo baakadeeyey. Waxay ku timaaddaa asal ahaan 2 qaybood oo kala duwan: qasabad gacmeed, iyo qayb bullaacad ah. Way fududahay in la fahmo waxa tagaya meeshii lagu rakibo iyada oo aan la siin tilmaamo
Waxaa laga dhisay bir halkii laga isticmaali lahaa caag, waana mid aad u adkeysi badan, qurux badan oo shaqeynaya. Waxaan SIGLY ugu talinayaa badeecadan haddii aad u baahan tahay beddelaad kuu ah RV tubbada musqusha. Waxaan mar labaad dooran doonaa sumaddan markii ay tahay in la beddelo qasabadda saxanka jikada iyada oo aan su'aal la weydiin.
Way adag tahay tayada. Easy & fudud si loo soo dajiyo. Taasi waa sababta aan u helo laba ka mid ah oo aan ku beddelo saxnadeyda. Runtii uma maleynaysid qiimaha ka yar $ 35. Wow, waa wax qiimo leh tayada ayaa ka fiican sida $ 50 ama ka badan oo aan uga soo iibsaday dukaanka maxalliga ah (Home Depot, Lowes…)
Si fudud loo rakibo wax aan jirin oo cusub. Socodka biyuhu waa weyn yahay! Waxay qaadatay 10 daqiiqo in la rakibo! Tani waxay si fiican uga shaqeysaa musqusha martidayada. Waxaan jecel nahay muuqaalka noo ogolaanaya inaan xakameyno kuleylka iyo qabowga isla waqtigaas. Waxay la timid dhammaan qaybaha tilmaamuhuna way fududahay
Kani waa qasabad quruxsan oo si fiican loo dhisay. Waxay umuuqataa tuubbo magac caan ah oo caan ah, laakiin sifiican ayaa looga hooseeyaa iyo lambar macquul ah. Waxay la imaanaysaa guluusyo dhoobada fiican leh oo shideysa shidida walxaha shidan dime aan dillaacin haba yaraatee. Waxaa jira dhisme ku dhex shaqeeya hawada kaas oo bixiya qaddarka saxda ah ee biyaha isagoon keenayn wax buuq ama buuq ah. Dhamaadka nikkel-ka ee la caday ayaa sifiican ula socda saxankayga.
Waxay igu qaadatay oo kaliya 15 daqiiqo inaan tan ku rakibo nacasnimadayda cusub. Waxaan jecelahay qulqulka pop up, taas oo aad uga fudud inlagu rakibo marka loo eego tuubbada kor loo qaado. Tuunbada aan keenay waxay ka samaysan tahay naxaas tayo sare leh. Si aad u wanaagsan ayaa loo sameeyay oo adag, waa hubaal inuu socon doono muddo dheer. Qiimuhuna waa weyn yahay, sidoo kale. Waxaan iibsan doonaa laba kale si aan ugu beddelo musqusha kale.
Waa wax soo jiidasho leh, oo sahlan in la isu geeyo oo aan daadin. Ereyga kaliya ee digniinta ah ayaa ah in biyuhu ay la soo baxaan xoogaa cadaadis ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad leexiso burooyinka si aad biyo badan u hesho.
Tani waxaa loogu talagalay musqusha sayidkayga, midkeygii asalka ahaa wax badan ayaa daadanaya, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan helo mid cusub oo muuqaal fiican leh. Marka waxaan heli doonaa qaab cusub oo aan ugu tala galay musqusha. waa wax aad u fudud in la rakibo, tayo fiican, waxaana aaminsanahay inay ka wanaagsan tahay isla qiimaha alaabooyinka ku yaal Lowe ama Depot Home. Waan hubiyey labadaas dukaan, tuumbooyinkuna aad ayey qaali ugu yihiin halkaas, badankooduna qiyaastii waa $ 70. WOWOW waxay leedahay tayo isku mid ah qiimahaas qiimaha ee labadaas dukaan.
Runtii waan jeclahay qasabadani. Way fududahay in la rakibo. Waxay u dhigantaa armaajooyinka musqusha si wanaagsan. Aad ayaan u faraxsanahay waan iibsaday. Waa mid aad u jaban. Ma hubo sida dhabta ah ee ay u sii socon doonto laakiin waxay umuuqataa inay leedahay awood ay ku adkeysato sanadaha.
Aad u fududahay rakibid fudud. Tayo fiican. Kaliya iiga qaado 10min si aan u beddelo. Biyaha si dhakhso leh ayey u soo baxaan. Sidaas u qalantaa.5 xiddigood
Waa heshiis fiican. Tuubada ayaa loogu talagalay musqusha qolka hoose.Waxaan haystaa waqti aan ku rakibo taa maanta. Waan jeclahay naqshada ku saabsan qasabada waana sahlan tahay in la rakibo. Waxyar oo niyad jabsan ayaa yara culus. Malaha macnaheedu waa tayo sare.
Qiime aad u cajaa'ib badan - tayo wanaagsan, sahlanaanta rakibida, qaabka Aad ayaan ugu qancay iibsigan. Tuunbo aad u fiican oo tayo sare leh.
Baakadaha xirfadleyda ah Aad baan ugu faraxsanahay, hareeraha oo dhan, badeecadan laga soo iibsado ilaa rakibidda. Waad ku mahadsan tahay Tani waa qiimo aad u fudud oo aad u fudud in la rakibo. Wax kasta oo adag oo adag.
Waxaa looga shaqeeyay badalida wax aan waxba tarayn ee musqusha oo si dhaqso ah markab looga iibsado mar labaad ayay ka iibsan doontaa
Shay weyn. Aad u rakib fudud. Jacaylka hoos u riix godka gogosha ee la raray. Aad u jilicsan
Rakibid fudud, dhaqso looma dhigin, biyo soo saarid isku mid ah, waa ku habboon tahay in la isticmaalo iyo qaabeynta muuqaalku waa mid aad u jilicsan, qasabada waxtarka quruxda badan waa mid aad u wanaagsan, biyuhu aad ayey u cad yihiin, ilmaha leh maalmo badan, runti aad wanaagsan, daadi dhammaan dhinacyada waa kuwo aad u habboon, uguna maadada cusub
Tuubadaani waxay ku fiican tahay musqusha. Waxay leedahay gacan qabsi waana fududahay in la arko haddii qabow yahay ama diiran tahay. Sidoo kale way fududahay in la isticmaalo qoyskeygana oo dhami way jecel yihiin.
La iibiyey: 16